के जोगाउन सक्लान् त साख सिक्वलले ? – Everest Dainik – News from Nepal
के जोगाउन सक्लान् त साख सिक्वलले ?
साउन १४ । अहिले नेपाली चलचित्रमा सिक्वेल फिल्मको लहर चलेको छ । सुरुको चलचित्र हिट हुने बित्तिकै सोही नामको पछाडि २ थपेर नयाँ चलचित्र निर्माण गरी दर्शकहरुको सामु प्रस्तुत गरिन्छ ।
२०७४ मा रिलिज भएको पहिलो सिक्वेल फिल्म बन्यो– सायद–२’ । सुनील रावलले भारतीय टेलिसिरियलमा काम गरेका पुष्पराज न्यौपानेलाई निर्देशक लिई निर्माण गरेको सायद–२ असार ३० मा प्रदर्शनमा आयो । तर, साखसमेत जोगाउन सकेन ।
निर्माता रावलले सुरज सुब्बाको निर्देशनमा पाँच वर्षअघि सायद फिल्म निर्माण गरेका थिए । संयम पुरी, विल्सनविक्रम राई, अराज केशवलगायतका नयाँ कलाकारले अभिनय गरेको सायद हिट भएको थियो । तर, उनै निर्माताले निर्माण गरेको सायद–२ भने हलमा टिक्नै सकेन । नाममात्र सिक्वेल भएकाले दर्शकले नपत्याएको फिल्म वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ । निर्माता रावलले आफ्नो हिट फिल्म होस्टेलको सिक्वेल पनि बनाएका थिए– ‘होस्टेल रिटन्र्स’ । त्यो भने हिट भएको थियो ।
यो साल प्रदर्शनमा आएको दोस्रो सिक्वेल फिल्म बनेको छ– ‘प्रेमगीत–२’ । शुक्रबारदेखि प्रदर्शनरत फिल्मले पहिलो दिन हाउसफुलको व्यापार गरेको छ । रामशरण पाठकको निर्देशनमा सन्तोष सेनले निर्माण गरेको प्रेमगीत–२ लाई पनि २०७२ को चर्चित फिल्म प्रेमगीतको सिक्वेल भनिएको छ । प्रेमगीतको अन्त्यमा मुख्य अभिनेता, अभिनेत्री प्रदीप खड्का र पूजा शर्माले पहाडबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । जसकारण प्रेमगीत–२ लाई पनि नाममात्रको सिक्वेल भन्ने गरिएको छ । सिक्वेलमा प्रदीपका साथ नव–अभिनेत्री अश्लेषा ठकुरी प्रमुख भूमिकामा छिन् ।
अर्को सिक्वेल फिल्म प्रदर्शनको तयारीमा छ अब । फिल्म हो– ‘धूम–२’ । जयकिसन बस्नेतले निर्माण गरेको धूम–२ भदौ ८ मा दर्शकमाझ आउँदै छ । धूम–२ मा जयकिसनबाहेक धूमका कुनै कलाकार पनि दोहोरिएको देखिँदैन ।
गीत, प्रोमो सार्वजनिकसँगै चर्चामा रहेको सिक्वेल हो– ‘ए मेरो हजुर–२’ । अभिनेत्री झरना थापाको निर्देशनमा सुनीलकुमार थापाले निर्माण गरेको फिल्म दर्शकमाझ प्रतिक्षित बनेको छ । फिल्मको कथा ‘ए मेरो हजुर’सँग नै सम्बन्धित रहेको झरना बताउने गर्छिन् । फिल्ममा सलिनमान बानियाँ र साम्राज्ञी शाह प्रमुख भूमिकामा छन् । यो चलचित्र आगामी भदौ १६ गते रिलिज हुँदै छ ।
नेपाली फिल्म इतिहासमै अहिलेसम्म सर्वाधिक व्यापार गरेको छक्का पञ्जा फिल्मको सिक्वेल ‘छक्का पञ्जा–२’ दशैँको अवसरमा प्रदर्शन हुँदैछ ।
दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा बनेको फिल्म दशैंको अवसर पारेर असोज ११ गते दर्शकमाझ आउँदै छ । टिजर र गीत सार्वजनिकसँगै चर्चा चुलिएको यो सिक्वेलले पहिलो फिल्मको साख जोगाउला कि नजोगाउला भन्नेमा दर्शक, फिल्मकर्मी तथा सञ्चारकर्मीमा बहस चल्ने गरेको छ । फिल्ममा दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, स्वस्तिमा खड्का, बुद्धि तामाङलगायतले अभिनय गरेका छन् ।